A lebhizinisi, okwenza imikhiqizo, kufanele ukhiqize ezinye Inqubomgomo yokuthengisa, umsebenzi ngokushesha iwukwenza izimpahla kumthengi ekupheleni. Ngenxa yalokho, yemakethe kumele ithuthukiswe uhlelo elilungile kakhulu wezimpahla ukulethwa kumthengi. Kuhlanganisa eziningi izakhi yezokuthutha isitoreji, nokucubungula imikhiqizo. Isikimu ngokuletha umkhiqizo kumsebenzisi wokugcina kufanele ibe isevisi isici, ukusebenza ngokushesha emva ukudayiswa kwezimpahla.
Umbuzo ayisihluthulelo ukuthengisa cwaningo ukuze ukhethe iziteshi zokusabalalisa. Lezi Amacebo ukulethwa kwezimpahla kumthengi kukhona ukungezwani phakathi kwakho.
Distribution Iziteshi - lawa ngazo ukuhamba kwezimpahla senzeka ngokuqondile nomakhi kumthengi ekupheleni. Izinhlangano noma nabantu abasebenza emkhakheni ukuhamba kwezimpahla, eziningi imisebenzi. Amanye awo yilawa:
- ukusabalalisa, iqoqo kolwazi ukumaketha ;
- yokuthengisa ukukhuthazwa ;
- kusungula oxhumana;
- umkhiqizo uvumelane nezidingo zamakhasimende (emabhokisini inhlangano, ukuhlunga);
- Moving futhi isitoreji kwezimpahla;
- ngezimali operation evamile isiteshi.
Noma iyiphi indlela kwezimpahla ezihambayo libhekene khona sendikimba amaningi:
- imikhiqizo ngokomzimba;
- ubunini bempahla;
- kuhanjiswa kwemphahla.
iziteshi zokusabalalisa ezihlobene sphere amasevisi, libhekene ukuhamba umkhiqizo angaphatheki (ulwazi, imibono, njll). Izindlela yezimpahla ezihambayo ihlukaniswa ngokweminyaka inombolo yabo amazinga, ngamunye okuyinto iyiphi umlamuli okulingana nomkhiqizo umthengi sokugcina.
iziteshi zokusabalalisa kuthiwa selihlukene laba abathathu izinhlobo. Lezi zihlanganisa:
Direct iziteshi ikhathalogi ukusatshalaliswa uvumele ukulethwa imikhiqizo ngokuqondile umkhiqizi kumthengi (ekugcineni), ngaphandle labalamuli amasevisi. ukuqaliswa Ukuntuleka le ndlela ku-intanethi. It is kuchazwe yokuthi izinkampani ezihlinzeka amasevisi (ulwazi emkhakheni ukugembula, njll) ukuthi kulula ukuba kusebenze ne-computer.
iziteshi zokusabalalisa Direct zinezikhathi izici eziningana:
- ivolumu elincane izimpahla ezithengisiwe;
- sisondelene umkhiqizi kanye umthengi;
- zamanani nezimo;
- ifa elihle kakhulu ulwazi mayelana izimpahla ezazithengiswa;
- enendawo eqinile wezimali ka umkhiqizi;
- Amathuba inkonzo lobuchwepheshe imivo badayisa;
- ukuthela inzuzo ephakeme kusuka yokuthengisa;
- impendulo ulwazi kanye nekhwalithi evela kumakhasimende.
iziteshi zokusabalalisa engaqondile ihlanganisa ukuhamba kokuqala izimpahla kamakhi ngqo umlamuleli. Futhi kuphela emva kwalokho kumsebenzisi wokugcina. Le ndlela kokusebenza esivamile izinkampani ukuthi ukunciphisa ukuthengisa izindleko, uthole ukufinyelela izimakethe ezintsha, kodwa uya buthaka ukuxhumana ngqo umthengi.
Izici nobuntu yokuthengisa engaqondile yilezi:
- yokuthengisa ephakeme ivolumu;
- ongaphakeme ezingeni umkhiqizi ukuxhumana ngqo umthengi;
- Inqubomgomo intengo ngaphansi nezimo;
- yokuntuleka nabathengisi ngolwazi olwanele mayelana nekhwalithi yomkhiqizo;
- isikhundla buthaka wezimali ka umkhiqizi;
- ezingaba ongaphakeme sesondlo izimpahla;
- ethola iholo kancane ukudayiswa.
iziteshi zokusabalalisa okuqondene uhlobo exubile, sihlanganise izici engaqondile neqondile ukumaketha izindlela.
Yini ibhizinisi ongayenza ekuphileni: sikhetha endabeni umphefumulo
Indlela ukudayisa umkhiqizo: Marketing okungumsu
Umonakalo Real. Ukuqoqwa umonakalo wangempela
Okufanele ukwenze ukwenza imali?
Cocktails vodka: ukunambitheka ngaphezulu, inqaba kancane
Kanjani dymovuhu: incazelo emfushane
Nomthandazo kusuka ukwesaba nokukhathazeka. Nomthandazo izingane ngesikhathi sokulala ngokwesaba
Imvukuzane ekhaleni ukuthini lokho? Meaning of nezimvukuzane ebusweni bowesifazane indoda
Yini okufanele yenziwe utamatisi sigqoka
I-Phillips E160: ukubuyekezwa
Kuthanda kanjani Kalinin kaMasipala umugqa